Nkọwa dị n'etiti ArcGIS na SuperGIS (nke dị ugbu a na Spanish) - Geofumadas
Julaị, 2013 ArcGIS-ESRI, innovations, SuperGIS
Ọ na-amasịkarị m iji atụnyere m, na nke a na n'oge ememme SuperGIS na Spanish dị ugbu a, anyị na-egosi ntụnyere dị n'etiti ArcGIS na SuperGIS na nsụgharị desktọọpụ ha. Na-akọwapụta ụfọdụ akụkụ ndị ha nakọtara, atụnyere ngwa ESRI / Supergeo ndị ọzọ anyị ga-ahụ na ntụnyere n'ọdịnihu.
Nkọwa nke arụmọrụ n'etiti ArcGIS na SuperGIS
Arụ ọrụ SuperGISỤdị SuperGISNdị ọkachamara. ArcGISNhazi ArcGISAvanz.
Hazie nkwado X X X X
Vector: SHP, MIF, DXF, GML, DWG DGN V8, wdg. X X X X
Raster: MrSID, GeoTIFF, BMP, GIF, JPG, JPG2000, ECW, PNG, LAN, GIS, wdg. X X X X
Dika iwu OGC (WMS, WCS, WFS, WMTS) X X X (ọ bụghị WMTS) X (ọ bụghị WMTS)
Ngwongwo ntughari data (dika DXF ka GEO) X X X X
Ngwá ọrụ iji dozie data na nha (ọnụọgụ abụọ nke ọdịdị) X X - -
Ihe okike na nyocha ihe ngosi
Mepụta, dezie ma nyochaa data gbasara ohere
Mee ka eserese na eserese X X X X
Nchọpụta na ada
Mepụta ụdị akara
Akara akwa OpenStreetMap
Ihe osise di elu (dika nhicha ahihia, ihe di mfe, wdg)
Ngalaba Editor X X
Ihe ngosi anya nke geoprocesses X X X X
Nhazi data na ngọngọ
Ntughari Raster na Vector
Mgbanwe nke ụdị geometry X X
Lee (Access MDB, SQL Server, PostgreSQL, Space Space)
Dee (Access MDB, SQL Server, PostgreSQL, Space Spatial)
Onye otutu ndi mmadu na-edezi otu klas a na Geodatabase VV X X
Mmekọrịta na ihe nkesa
Mmekọrịta nke data sitere na ihe nkesa
Mepụta kaadị ntanetị
Ihe mgbakwunye maka data GPS dị iche iche postcard (Rinex)
Mgbasa ozi nyocha
Onye na-enyocha ụbụrụ
Onye Nyocha Spatial
Onye nyocha netwọk
Onye Nyocha Ọkọlọtọ Spatial
Onye nyocha nke biodiversity X X
Ọ bụ akpali mmasị ịhụ otú SuperGIS karịa eke omenala arụmọrụ-achọ ndị na-ama mara na ArcGIS ọrụ 10, dị ka e gosiri na table n'elu.
Na nyiwe abụọ, ArcGIS na SuperGIS, ọ bụ naanị ndọtị nyocha topological gụnyere na ntọhapụ, ndị ọzọ chọrọ ịzụta iche iche.
Vidio na-esonụ na-egosi nhazi windo abụọ, ebe a na-eme usoro ihe omume abụọ ahụ.
Ná mmechi, ihe na-eme na ma mmemme nwere ike ime otu ihe ahụ, na ụzọ ụfọdụ ọbụna karịrị SuperGIS.
Ọnụahịa maara ihe: SuperGIS na-efu ihe na-erughị ọkara nke ArcGIS.
Na banyere ndị ọzọ pụtara ọhụrụ, na-atọ ụtọ nke ukwuu na anyị natara a nso ikpeazụ version of SuperGIS 3.1a na na ulo oru a ọnwa, na ihe ijuanya na anya na afọ ojuju ịmata na:
Ọ na-agụnye asụsụ Spanish
Ekwesịrị m ikweta na ebumnuche anyị ịmata SuperGIS ọnwa ole na ole gara aga kpaliri nkwenye ha ịbanye n'ahịa ndị na-asụ Spanish ka gị na gị nwee ESRI. Na na n'oge dị mkpirikpi ha etinyela asụsụ anyị ... ọ na-egosi oke iwe nke ngwa ọrụ amụrụ na Taiwan mana na-edobe onwe ya nke ọma na Asia na Middle East.
Otu esi agbanwe asụsụ n'asusu SuperGIS
Maka nke a ị ghaghị ime:
Na họrọ họrọ mpaghara taabụ.
Ntughari: Mara ezigbo mma.
N'ihi na anyị na Hispanic gburugburu ebe obibi, iwu bụ ezi ihe na ihe na ọgwụgwụ na-eto eto bụ onye ọrụ, ebe ọ bụ na ịdị adị nke a asọmpi software na a ala price na uto na-na-ewere na free software na-achọ onwe enterprise na-arụ ọrụ na-eje ozi ma ghara iji uru nke ahịa ahụ na-eme ihe.
Lee ka o si dị mma maka SuperGIS, ihe dị mma maka asụsụ Hispanic anyị.
Ibudata na Desktọpụ SuperGIS
Previous Post«Previous The Engineering Engineering na mmepe nke mba America
Next Post Ụdị ihe atụ ahụ: WebinarNext »
3 Azịza ya na "Nkọwa n'etiti ArcGIS na SuperGIS (nke dị ugbu a na Spanish)"
Jayala kwuru, sị:
Ana m achọ usoro pụrụ iche na arcGIS maka akụ cadastre
Mee ya na Ecuador
Nke ahụ bụ Fernando. N’isiokwu ọzọ, anyị ga-enyocha ngwa ọrụ na ndọtị ndị ọzọ.
Fernando Paredes kwuru, sị:
Naanị ụfọdụ arụmọrụ Desktọpụ ka e jiri ya tụnyere. Desktọpụ ArcGIS nwere ọtụtụ nkwalite ndị na-anaghị akpọ. ArcGIIS Server, ArcGIIS Online, ArcGIS Oge ojiri maka ndị mmepe ọ bụla n'elu ikpo okwu (Android, IOS, wdg) ma ọ bụ okwu.
Ka onye obula dee uzo nke aka ya banyere ihe dika ya na ihe obula. ArcGIS adịbeghị anya ịghọ ngwaahịa iji ghọọ usoro ikpo okwu nke na-enye ndịọrụ nwere nkà na ụzụ, ọdịnaya dị mkpa maka nyocha na ngwa iji jiri ihe ọmụma ndị ọkachamara GIS na ndị ọrụ na-achọ nanị iji map ndị dị na mbara igwe mee ihe. mkpebi dị mma n'ụbọchị gị, ụbọchị.